ABSHIR BACADLE: GABAYADA WAHABI MAXAA LA YIDHI
Waxaan go’aansaday toddobaadkan inaan joojiyo ka hadalka arrimaha siyaasadda, anigoo ka fikiraya inaan u weecdo dhanka suugaanta. Abshir Nuur Faarax (Abshir Bacadle) wuxuu ka mid yahay dadka aftahanimada leh ee Soomaalidu ku faanto. Gabaygu waa hal dhinac. Dadka yaqaana waxay ku sifeeyaan inuu yahay nin u hogaansan mabaadi’da iimaanka adag, iskuna daya inuu dadka ka aqbalo. Wuxuu naftiisa iyo maalmihiisa u huraa dacwada Islaamka. Wuxuu ka mid ahaa ardaydii guusha ka gaadhay Sh. Nuur Cali Colow, Aabihii iyo aasaasihii wahaabiyada, dad aad ugu dhow Sheekh Nuur-diin, Allaha u naxariistee, wuxuu ii sheegay in Bacadle uu ka mid yahay ragga uu aadka u jecel yahay Sheekha.
Markuu Bacadle Wahaabiyada noqday wuxuu go’aansaday inuu tawxiid fidiyo, kana tago suufiyada ka shaqaysa dadka iyo ilaahay, si loo bixiyo allabaryo iyo nolol joogto ah. Bacadle wuxuu tiriyey gabayo badan, dhammaantoodna waxay daadiyeen biyaha si ay u baryaan Alle keligiis.
Qaabkii uu u curiyay gabayada si uu u soo jiito dareenka dadka badan ayaa ka qayb qaatay fahamka dad badan. Asxaabtiisa wahaabiyada ayaa ku koobnaa masaajida wax xiriir ahna lama aysan lahayn dadka. Bacadle wuxuu suurta galiyay wahaabiyiinta inay sheekada u gudbiyaan. dadweynaha, iyadoo suugaanta ay soo tebinayaan dadweynaha.
Dhinac ahaan, wadaad ahaan, waxaa jira waji kale oo ka mid ah doorkii Bacadle ee abwaan siyaasadeedka Soomaaliyeed oo bixiya talo iyo tusaalayn, wuxuuna ku leeyahay liis lama iloobaan ah dhammaan dhacdooyinkii Soomaalidu soo martay. kuna taageeray aragtidiisa, kana tiriyey gabayo taabanaya qofkasta oo dhageysta.
Wuxuu sidoo kale si weyn ugu lug lahaa kacdoonkii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana lagu xaman jiray inuu la saftay Caydiid xilligii uu dagaalka kula jiray Mareykanka. Markii aan la kulmay, waxaan weydiiyay sida uu u arko shakiga, wuxuuna iigu jawaabay, “Weli waxaan u maleynayaa inaan saxanahay, maxaa yeelay Mareykanka iyo Caydiid waxay isku dhow yihiin Caydiid, waxaana qabaa inaan la dagaallamo Mareykanka inay sax tahay maxaa yeelay iyagu dalkeenna u yimid si gardarro ah. ” Waxaan ku iri ma jirtaa gabay aad tirisay oo aad raali galin ka bixinayso oo aad khalad u aragto? Wuxuu yidhi. Waxaan u maleynayaa heesta aan ka qoray dagaalkii Bari ee dhex maray wadaaddada iyo SSDF inay qalad ahayd, maxaa yeelay ma ahayn sidaan u hadlay, laakiin si kale ayaa loo fasirtay.
Waxaan la kulmay Abshir Bacadle 2000. Markii aan booqday Muqdisho, waxaan wada hadalnay ku dhawaad ​​saacad. Wuxuu ahaa nin dabeecad wanaagsan, nin dalka iyo dadkaba aad uga naxay. Sheekadiisa murugo iyo yaab ayaa ka buuxay meesha uu ku dambayn doono mustaqbalka. Soomaaliyeey.
Bacadle ayaa caan ku ahaa inuu wax badan ka gabyo dhibaatada haysata Soomaalida, inbadan ayaa hada isweydiinaya maxaa ka aamusiiyay baryahan? Muxuu Bacadle u diiday inuu ka hadlo arrimaha ku soo kordhay siyaasada Soomaaliya? Wuxuu moodayay inuu ka maqanyahay dhacdo uu ka hadlo markaa wuu iska aamusay, markaa waxaan u maleeyay inay suurta gal tahay in Bacadle lala hadlo oo la dhaho: Waxaad tahay abwaan dad badan sugayaan ee wax sheeg intaanay dhicin.
Soomaalidu waxay dawlad ka dhisteen Nairobi, Cabdullaahi Yuusuf ayaa loo doortay madaxweynaha Soomaaliya. Miyaanay tani ahayn dhacdo muhiim ah oo mudan in laga fiirsado? Ciidamada Itoobiya ayaa lagu xantaa inay soo galayaan Soomaaliya iyagoo taageeraya dowladda cusub. Horay ayaad u tirisay gabay aad ku taageerayso Afghanistan oo aad ugu digeyso Mareykanka, adoo leh Muslimiinta ayaa soo jeeda ee ha joogsan. Majmaca Culimada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qalad weyn ku tilmaamay keenista ciidamada shisheeye. Waxaa taa barbar socday hanjabaada Sheekh Xasan Daahir Aweys, oo ah askari ajnabi ah, oo ah haddii uu dalka soo galo waan la dagaallameynaa. Haddaba maxaa ku aamusiiyay wadaad Soomaaliyeed? Dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waa u xiran yihiin Soomaalida, waxaa laga yaabaa haddii aad dhahdo inay ceeboobi doonaan, mar uun ka kac Gabadh yar oo magaceeda la yidhaa Samsam ayaa in badan ku jirtay xabsiga magaalada Hargeysa, iyada oo kiiskeeda ay ka hadleen kuwa u ololeeya xuquuqul insaanka oo aad mar dhaliil u soo jeedisay. Su’aashu waxay tahay Bacadle ma u heesi doonaa gabadha afduubatay?
Waan ogahay in Dr.Maxamed Xussein Macallin uu daabacay uruurinta gabayadaada, oo ay isku soo aruuriyeen gabayadaada, wuxuu noqday buug ay soomaalidu aad ujeceshahay, markaa markii diiwaankaaga la daabacay ma waxaad xidhay dhamaan gabayada? Mar alla markii aad go’aankaas qaadatay, annagu kulama wadaagi doonno, oo waxaad ogaataa in hibada aad Eebbe ku siiyay ee ah hal-abuurnimada aysan ahayn mid aad adigu leedahay oo keliya, waana wax aan kula wadaagno, lagamana oggola inaad go’aannadaada gaarto. Marka maanta waa waqtigii ay dadka Soomaaliyeed baahi weyn kuu qabeen, ee soo bixi caqligii duugnaa ee aad dib u celinaysay. Waxaan rajeynayaa inaan ku arko goor dhaw adoo soo ifbaxaya oo wadada noo furaya.
Fahad Yaasiin Xaaji Daahir27-Dec-2004Xigasho: SomaliTalk
Waalid adeecsan: Balanqaadkii Mesut Ozil